Dianabol: ဘယ်လိုယူမလဲ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲ။ [အမှန်တရားကိုဤနေရာတွင်သင်ယူပါ။ ]
ဗီတာမင်စီ။ ဘာအတွက်လဲ။ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကဘာတွေလဲ။ ထွက်ခွာသည်!
ခန္ဓာဗေဒ	 17 နိုဝင်ဘာလ 2017
DBol လို့လည်းလူသိများ Dianabol ဤသည် steroids အများစုနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသောအဆိုပြုချက်နှင့်အတူယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ပြုလုပ်သော Steroid ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သောအစား၎င်းကိုနှုတ်ဖြင့်သောက်သည့်ဆေးများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ခွန်အားနှင့်ကြွက်သားထုထည်ကြီးမားစွာရရှိရန်ကတိပေးထားသည်
ဤဆောင်းပါးသည်ဤ steroid ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သော်လည်း anabolic steroids ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသတိပြုရန်လိုအပ်သော်လည်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုနှင့်လိုအပ်သောစောင့်ရှောက်မှုများကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်ပါသည်။ ။ ပိုမိုသိလိုပါသလား? ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးကိုဆက်ဖတ်ပါ။
Dianabol landerlan ၏သမိုင်း
Dianabol ဝယ် testanderone မှဆင်းသက်လာသောဒြပ်ဝတ္ထုတစ်ခုအနေဖြင့်တီထွင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလတည်ဆောက်သူများ၏လောကတွင်လူကြိုက်များသော methandrostenolone သည် (သို့မဟုတ်) သူမနောက်မှအမှတ်တံဆိပ်များစွာသည်သူမဒီ steroid ကိုအသုံးပြုခြင်း၌သူမတွေ့ရှိခဲ့သောနယ်ပယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုရယူရန်ကြိုးစားရန်စျေးကွက်တွင်ပေါ်လာခဲ့သည်။
၎င်းကို ၁၉၆၀ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်စတင်မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးမကြာမီပြိုင်ဆိုင်မှုအားကစားအမျိုးအစားအားလုံးတွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသော anabolic steroid ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ရလဒ်များ၏ထိရောက်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ John Bosley Ziegler သည်ပထမဆုံးဖြန့်ချိသူဖြစ်သည် Dianabol စျေးနှုန်း အမေရိကန်အိုလံပစ်အားကစားသမားများအတွက် (methandrostenolone) ။ ပစ္စည်းကိုသုံးပြီးနောက်မှာ၊ အားကစားသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကအများကြီးပိုကောင်းတယ်၊
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Dianabol ထုတ်လုပ်မှုသည်အချိန်အတော်ကြာပေါက်ကွဲပြီးသုံးစွဲမှုကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်ထုတ်ကုန်ကိုဈေးကွက်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ သို့သော်လူကြိုက်များမှုမပျောက်ခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်အနက်ရောင်စျေးကွက်တွင်အရောင်းရဆုံးပါးစပ်စတီရွိုက်ဖြစ်သည်။
Dianabol ဆိုတာဘာလဲ ဘာအတွက်လဲ
Dianabol သည် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကထိုအမည်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ယနေ့ထုတ်ကုန်ကို Anabol or Andoredan အဖြစ်တွေ့ရှိရသည်။
၎င်းဒြပ်ပေါင်း၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းမှာခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများကအသုံးပြုသည့်မက်သဒရနိုတိုနွန်းဖြစ်သည်။ ကြွက်သားထုထည်တိုးပွားလာခြင်းအပြင် Dianabol သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် Arnold Schwarzenegger ၏အကြိုက်ဆုံး steroids များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက Dianabol ကိုကျော်ကြားလာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ကွဲပြားခြားနားမှုများအနက်၎င်းသည်ဆေးပြားများအတွက်ပထမဆုံးပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ကြွက်သားများရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အများဆုံးအသုံးပြုသောအားကြီးသော anabolic steroid ဖြစ်သည်။
[junkie-tabs] [junkie-tab title =” အနည်းငယ်သောအချိန်တွင်ကြွက်သားကိုမည်သို့ရရှိနိုင်မည်ကိုလေ့လာပါ”] Giga ယခု Giants Formula ကို ၀ ယ်ပါ။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆုကြေးများကိုရယူပါ။ your သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းနှင့်စတီရွိုက်ကိုမည်သို့အန္တရာယ်ကင်းစွာအသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာပါ။ သင်၏ဥစ္စာကိုယူပါ ဦး ဟုဆို၏။ [/ junkie-tab] [/ junkie-tabs]
ပေါင်းစပ်အချက်: N / A
ထုတ်လုပ်သူ: စီဘ (မူလ)
ထိရောက်သောဆေး: 25-50mgs (5mg နှင့် 100mg အထက်ဆေးများအားအစီရင်ခံတင်ပြသည်)
ဘဝတစ်ဝက်: ပါးစပ်ဖြင့် 6-8 နာရီ။ နှင့်ဆေးထိုးပုံစံအတွက် 48-72 နာရီအကြား။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိအချိန်: ၆ ပတ်ထက်ပိုသော
Anabolic / Androgenic အညွှန်းကိန်း (အပြောင်းအလဲ): 90-210: 40-60
DHT သို့ပြောင်းသည်: မဟုတ်
အခြား steroids များနည်းတူ Dianabol သည်သံသရာများ၌အသုံးပြုသည်၊ သို့သော်၎င်း၏ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုအားကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဒုတိယနည်းလမ်းမှာအခြား steroids ၏သံသရာအကြားဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာအခြားထုတ်ကုန်မှထုတ်လုပ်သောသက်ရောက်မှုများသည် TPC နှင့်အတူအလွန်နိမ့်သောဆေးထိုးအရမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။
Dianabol သည်အမျိုးသမီးများအတွက်၊ သေးငယ်သောဆေးများသောက်လျှင်ပင်မသောက်ပါ။
Dianabol သည်ကြီးစွာသောတာဝန်ရှိသည် သင်၏သုံးစွဲသူများပိုမိုအားကောင်းလာသည်ပိုမိုပြင်းထန်မှုနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးအတွက်ရရှိလာတဲ့။
ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသောကြောင့်၎င်းသည်နိုက်ထရိုဂျင်ထိန်းထားမှုကိုပိုမိုထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် hypertrophy နှင့်သက်ဆိုင်သောလက္ခဏာဖြစ်သည် ကြွက်သားများပြည့်ပြည့်ဝဝကြည့်ရှုစေသည်၎င်းသည်အရည်ကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးကြွက်သားကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုထိခိုက်စေသည်။
စားသုံးမှုကိုလည်း catabolic အရေးယူရှိပါတယ်, cortisol အဆင့်ဆင့်လျှော့ချ ၇၀% အထိမြှင့် တင်၍ ခန္ဓာကိုယ်အားစွမ်းအင်အတွက်ကြွက်သားဆဲလ်များကိုစုစည်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်အားကစားသမားအားကြွက်သားအမြတ်ကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။
TPC - စက်ဘီးကုထုံးပြီးနောက်ဘာအတွက်လဲ။
မသိသောသူများအတွက်သံသရာလွန်ကာလကုထုံးသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့သေချာပေါက်ရောက်လာမည့် anabolic steroid ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားကျန်းမာနေစေရန်နှင့်ကြွက်သားမျှင်များမဆုံးရှုံးစေရန်သေချာစေသည်
တစ်နည်းအားဖြင့် TPC သည်ခန္ဓာကိုယ်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် anabolic steroids ဆေးများကိုမသောက်မီသင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
အမှန်မှာ TPC သည်ခန္ဓာဗေဒအားဆေးပမာဏများများရရန်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောဆိုးကျိုးများကိုလျော့နည်းစေပြီးအထူးသဖြင့် anabolic steroids ၏ဆိုးကျိုးများကိုလျော့နည်းစေသည်။
CPT ကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ၆ ပတ်ကြာ“ protector များ” ပါ ၀ င်သည့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစားပွဲတစ်ခုကိုသင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
TPC အကြောင်းအားလုံးသိလိုပါသလား။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ!
ထို့အပြင်ဤ ၀ တ္ထုသည်အခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးနိုင်သည်။ ကြွက်သားများမြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ အားကောင်းလာမှု၊ ကယ်လိုရီဆုံးရှုံးမှု၊
စံပြသောက်သုံးမှုသည်နိုင်ငံနှင့်ထုတ်လုပ်သူအကြားကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်၎င်းစုပ်ယူသည့်အရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်မူရင်းညွှန်ကြားချက်လမ်းညွှန်များသည်နေ့စဉ် 3mg မှ6to5ပမာဏသို့မဟုတ်တစ်နေ့လျှင် ၁၅ မှ ၃၀mg အထိသောက်သုံးရန်အကြံပြုသည်။
ဒါပေမယ့်ဒီအနိမ့်သောက်သုံးသောခန္ဓာကိုယ်မှဆောင်ကြဉ်းနိုင်ရလဒ်များနှင့်အတူ, စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်အောင်အတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ခြင်း, အားကစားသမားအများအပြားအများကြီးပိုကြီးတဲ့ပမာဏယူပါ။
မည်သည့် anabolic steroids များနည်းတူကောင်းမွန်စွာအသုံးမပြုပါကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြီးကြပ်မှုဖြင့်သူတို့သည်ကြီးလေးသောတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအမှုကြားဖူးရပေမည်။
ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းကိုမစတင်ခင်၊ သင်အန္တရာယ်များကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အသုံးအများဆုံးစာရင်းများ -
အရည် retention ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
ကျယ်ဝန်း mammary glands (G ။ )မပြည့်စုံသော)
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးသည့်အတိုင်း Dianabol သည် ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးဤအမည်အောက်တွင်မတွေ့ရှိရပါ။
သို့သော်ဤ steroid မှဆင်းသက်လာအလားတူထုတ်ကုန်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များအောက်တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် Anaboleအန်ဒိုရန် ဥပမာနှစ်ခုဖြစ်သည်။
Giants Formulas- ဘယ်လိုသဘာဝကြီးထွားလာနိုင်မလဲ။
efficientရာမကိုယ်ထည်ကိုအနိုင်ယူနိုင်သည့်စွမ်းအင်ကြီးမားသောကိုယ်ထည်ကိုအောင်နိုင်ရန်အတွက်သဘာဝရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာအစီအစဉ်ဖြစ်သည် Giants ဖော်မြူလာ။
ကြွက်သားထုထည်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာသောလူတို့၏သံသယများကိုဖြေရှင်းရန်စဉ်းစားကာအားကစားရုံကြီးများ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလူတို့အားရှာဖွေတွေ့ရှိရန် Giants '' ဖော်မြူလာတွင်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ သူဘာစားသလဲ။ သူတို့ဘာတွေသုံးတာလဲ သူတို့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ကြသလဲ
လူများသည် anabolic steroids ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကြွက်သားထုထည်ကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လက်တွေ့ကျကျနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်အဓိကအားဖြင့်ဖန်တီးထားသည်။
The Giants ၏ဖော်မြူလာသည်ကာယပညာဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးရီကာဒိုအော်လီဗေးရားမှဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိအာဟာရလေ့လာမှုနှင့်ဘရာဇီးလ်ရှိထောင်ပေါင်းများစွာသောကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်လိုသော၊ အရည်အသွေးမြင့်အစားအစာနှင့်တိကျသောလေ့ကျင့်ရေး။
ကျောင်းသားများအနေဖြင့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များကမေးမြန်းခဲ့သည့်မေးခွန်းတစ်ခုမှာ ၁၀ ကီလိုဂရမ်ကို ၃ လအတွင်းမည်သို့တိုးမြှင့ ်၍ ကြီးထွားရန်ဖြစ်သည်ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Giants '' ဖော်မြူလာနှင့်အတူလိုဂို, ရီကာဒိုသည်“ လျှို့ဝှက်ချက်” ကို GIANT မည်သို့ဖြစ်လာမည်ကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်များနှင့်အချက်အလက်များကိုသင်ဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့နိုင်ပါ။
ဒီပရိုဂရမ်ကပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်စာအုပ် (၆) ခုပါ ၀ င်ပြီးသင်ဘာအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘာမှန်လဲဆိုတာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အကျိုးရှိရှိလေ့လာလိမ့်မယ်။ သင်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးပါ ၀ င်သည့်ဒီဂျစ်တယ်စာအုပ်များအပြင်သင်၏မေးခွန်းများအားလုံးကိုဖြေဆိုရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအထောက်အပံ့ကိုလည်းသင်ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Giants Formula ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
The Giants Formula ကိုရောင်းသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သာရောင်းသည်။ တနည်းအားဖြင့် Giants '' ဖော်မြူလာ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်။
တရား ၀ င် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ဤအစီအစဉ်ကို ၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်၊ သင့်အိတ်ကပ်နှင့်ကိုက်ညီသောစျေးသက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့်လုံးဝ ၀ ယ်ယူခြင်းကိုအာမခံသည်။ သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုသည်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေသည့်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ။
မှန်ပါသည်၊ သင်၏အစီအစဉ်ကို ၀ ယ ်၍ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းမှုကိုယခုပင်စတင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ ပထမ ဦး စွာသင်သည်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော https://formuladosgigantes.com/ ကိုဝင်ရောက်ပြီးသင်၏ငွေပေးချေမှုကိုလုံခြုံပြီးလျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်ဒီဂျစ်တယ်စာအုပ်များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နှင့်ပရိုဂရမ်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်လင့်ခ်ကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
စျေးနှုန်းများ၏အားသာချက်ကိုယူစူပါတတ်နိုင်ကြသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ် ၆ အုပ်နှင့်အရစ်ကျပေးငွေ ၁၂ ဒေါ်လာအတွက် ၂၄ နာရီပံ့ပိုးမှုသည်ငွေသားဒေါ်လာ ၉.၇၄ သို့မဟုတ် R $6။
ဤအစီအစဉ်သည်ပြည့်စုံပြီးသင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များရရှိရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်က Giants '' ဖော်မြူလာနဲ့ဘာတွေလေ့လာသင်ယူသလဲ၊ ဘာလုပ်မလဲ 'ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ -
Giant ၏ဖော်မြူလာအစီအစဉ်ကိုကြိုးစားခဲ့သူများသည်ရလဒ်များကိုအတည်ပြုပြီးအာမခံခဲ့ကြသည်။ အချိန်တိုအတွင်းသူတို့သည်ရလဒ်များကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီးညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုလိုက်နာ။ ၊
Giants 'Formula ကိုအကြံပြုတဲ့သူတချို့ဆီကအစီရင်ခံစာတချို့ကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိကျစွာရောက်ရှိရန်ကူညီနိုင်မည့်ဒီဂျစ်တယ်စာအုပ် ၆ ခုရှိသည်။ ဤစာစောင် ၆ အုပ်မှာ -
ကုမ္ပဏီကြီးများ၏အကြောင်းရင်း Steroid မစတင်ခင်သင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ အကျိုးရှိပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောသက်ရောက်မှုများ၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ၊ သက်ရှိနှင့်အပြန်အလှန်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ၊
Steroid သံသရာ: သင့်ကိုiantရာမအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အဆင်သင့်သံသရာနမူနာ ၁၄ ခု။
steroids ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်: ဤစာအုပ်သည်သင့်အားကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးများဆုံးစတီရွိုက်များ၊ သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်စသည်တို့ကိုပြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏သံသရာကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။
steroids ၏အာဟာရ: သင်လိုက်နာသင့်သည့်အစားအစာနမူနာများ၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုသင်၏အလေးနှင့်အလေးချိန်အရတွက်ချက်ရန်သင်ယူလိမ့်မည်။
Anabolized လေ့ကျင့်ရေး: သင်၏ရလဒ်များကိုအများဆုံးဖြစ်နိုင်ရန် ၅ ရက်ကြာလေ့ကျင့်ရန်ဥပမာများ။
နတ်ဘုရားမများ၏ပုံသေနည်း: အမျိုးသမီးများအတွက်ရည်ရွယ်သည့်စာအုပ်သည်အစားအစာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုးပွားခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအတွက် anabolic steroid သံသရာဥပမာများ၊
200 Anabolic ချက်ပြုတ်နည်းများ: လက်တွေ့ကျတဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ အသား၊ ငါး၊ ကြက်၊ ဝက်သား၊ နံနက်စာ၊
[junkie-tabs] [junkie-tab title =” အနည်းငယ်သောအချိန်တွင်ကြွက်သားကိုမည်သို့ရရှိနိုင်မည်ကိုလေ့လာပါ”] Giga ယခု Giants Formula ကိုဝယ်ယူပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆုကြေးများကိုရယူပါ။ your သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲပုံနှင့်စတီရွိုက်မည်သို့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာအသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာပါ။ ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ဥစ္စာကိုယူပါ ဦး ဟုဆို၏။ [/ junkie-tab] [/ junkie-tabs]
[junkie-alert style =” red”] ဒီဆိုဒ်သည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ steroids အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့မတိုက်တွန်းပါ။ [/ junkie-alert]
ပြီးတော့သင်ကစာသားကြိုက်တယ်? Dianabol နဲ့ပတ်သတ်ပြီးမေးစရာမေးခွန်းတွေရှိလား သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုချန်ထားပါ
အားလုံး dianabol အကြောင်းကို
dianabol များအတွက် tpc
testosterone ဟော်မုန်းနှင့် Dianabol
dianabol landerlan နွားထီး
dianabol 20 မီလီဂရမ်
dianabol hi နည်းပညာအစီရင်ခံစာများ
dianabol 10 မီလီဂရမ်
dianabol ဆေးပြား ၁၀၀
hi-tech ဆေးဝါး dianabol
dianabol 90 ဦး ထုပ်
dianabol 50 မီလီဂရမ်
dianabol 10mg ဆေးပြား
dianabol methandienone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
dianabol methandrostenolone ၁၀ မီလီဂရမ်
dianabol 25 မီလီဂရမ်
အစပြုသူများအတွက် dianabol သံသရာ
dianabol5မီလီဂရမ်
dianabol 90 tabs များ
dianabol landerlan စျေးနှုန်း
dianabol 40 မီလီဂရမ်
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုDianabol: အားလုံးအကျော်ကြားဆုံးသောခန္ဓာဗေဒအကြောင်းတစ်ခုပါ။"
1:2015 pm မှာသြဂုတ်လ 11, 06 - Edit
17:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 07, 30 - Edit
1:2015 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 22, 36 - Edit
မင်္ဂလာပါကောင်းသောည၊ ကျွန်ုပ်အသက်တာ၌ anabolic steroids ကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးသော်လည်း dianabol ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားပြီး ၀ ယ်ယူပြီးဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်များရရှိရန်နှင့်ဘာကိုဆက်ထိန်းထားရန်အရာအားလုံးကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်လိုသည်။ ငါကြွက်သားထုထည်တက်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သို့မည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်မည်သို့သံသယဝင်မည်နည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ အားကစားရုံသို့ကျွန်ုပ်သွားပြီးတစ်နှစ်ခန့်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ ထက်ဝက်, ငါမင်းရဲ့အဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကားလို့စ် Ferreira gulart သား
7:2015 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 02, 29 - Edit
ဟိုင်းနေကောင်းလား။ ငါ DIMABOL ကိုစတင်တော့မည်။ တစ်နေ့လျှင်မည်မျှဆေးပြားမည်မျှသောက်သည်ကိုသိလိုလျှင်ဖြစ်နိုင်လျှင်ငါ့ကို TPC ကိုကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါ။
23:2017 pm မှာမတ်လ 18, 15 - Edit
အဖြေများဖိုရမ်များကိုရှာဖွေခြင်းထက်သင်အားကစားဆရာဝန်သို့မဟုတ် endocrinologist သို့သွားခြင်းကပိုကောင်းသည်။
15:2015 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 14, 50 - Edit
ဒီ tpc မူးယစ်ဆေးဝါးကိုခြောက်ပတ်ပတ်အတွင်းသို့မဟုတ်တစ်နေ့တည်းတွင်နောက်ဆုံးအသုံးပြုပြီးနောက်သုံးပါ
12:2016 မှာဇန်နဝါရီလ 03, 24 - Edit
Organshild Optimal TPC, TPC သည်တက်ဘလက်များအားလုံးသောက်ပြီးနောက်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ရေများများစားစားစားခြင်း၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပရိုတင်းဓာတ်ပိုမိုစားသုံးခြင်းအားကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
17:2016 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 10, 50 - Edit
6:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 21, 51 - Edit
သငျသညျ DBOL ရလဒ်တစ်ခုလုံးကိုပျော်မွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင် TPC လုပ်သင့်ပါတယ်။
13:2016 pm မှာမတ်လ 22, 17 - Edit
ငါ့မှာ 1,78m 75kg ectomorph ရှိတယ်။
ငါဒိုင်ယာနာကိုသွားမယ်။ ငါ့ရဲ့ရလဒ်ကောင်းတွေရဖို့အတွက်၊ မင်းက Whey နဲ့ Bcaa နဲ့အစားအစာကိုကပ်ပြီးဖြည့်စွက်တာကောင်းတယ်၊
8:2016 pm မှာဇွန်လ 18, 53 - Edit
အချင်းလူ၊ အကယ်၍ သင်ဤသံသရာ၌သံသရာတစ်ခုလုပ်ရန်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်သံသရာကိုပင်ဖြစ်ပါစေ၊ သင်ဖြည့်စွက်ခြင်းကိုသံသရာ၌ထားရမည်။
18:2016 pm မှာမတ်လ 04, 11 - Edit
ချစ်ခင်ရသောသူငယ်ချင်းဒေါက်ဂလပ်စ် (whey protein, albumin, carnivore) ကဲ့သို့သောပရိုတင်းအချို့ကိုသင်ပိုမိုစားသုံးလေ။
10:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 18, 43 - Edit
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်မှာ - ပရိုတင်း၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီဖြစ်သည်။
သူငယ်ချင်းများ၊ မင်းရဲ့ ဦး ခေါင်းကိုစဉ်းစားပြီးမင်းကြွက်သားတွေအကြောင်းနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပါ။
27:2016 pm မှာမတ်လ 11, 08 - Edit
ဆရာဝန်မှမပေးသောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မသောက်သင့်ပါ။ ကျနော်တို့အကြီးအကျယ်နှလုံးရောဂါရှိနိုင်ဘူး။ ယူခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း။
28:2016 pm မှာမတ်လ 07, 00 - Edit
6:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 21, 56 - Edit
ဦး စဉ်အတွင်း silymarin ကိုသုံးနိုင်သည်။
ထိုအခါ TPC CLOMID + TAXIMOPHENE ။
HCG application များအတွင်း။
24:2016 pm မှာပြီလ 18, 33 - Edit
သံပုရာရည်သန့်စင်မှုသည် dianabol ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချပေးသည်
30:2016 pm မှာပြီလ 15, 39 - Edit
Dianabol ကို androgen 300 ဖြင့်သုံးနိုင်ပါသလား။
5:2016 pm မှာမေလ 16, 00 - Edit
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ငါ့ဘဝမှာ anabolic steroids ကိုတစ်ခါမှမသုံးခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် Dianabol ကိုငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ငါတောင်မှတောင်ဝယ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေရဖို့၊ ကျွန်ုပ်ကြွက်သားထုထည်ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ပို့ရန်အတွက်ထုတ်ကုန်များနှင့်သံသရာလည်ပြီးနောက်မည်သို့ယူရမည်နည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားကစားရုံသို့သွားနေသည်မှာခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းတွင်အစပြုသူမဟုတ်ပါ။ တစ်နှစ်ခွဲကြာရင်မင်းရဲ့အဖြေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
26:2016 pm မှာမေလ 07, 09 - Edit
မင်္ဂလာပါ၊ Diana သံသရာနေစဉ်အတွင်း TPC ကိုဘာလုပ်သင့်သလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
6:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 21, 53 - Edit
8:2016 pm မှာဇွန်လ 00, 20 - Edit
ငါ Dianabol ကိုသောက်တော့မယ်။ တစ်ရက်ဘယ်လောက်သောက်သင့်လဲ။
နှင့်သံသရာကာလအတွင်းနှင့်အပြီး Tpc များအတွက်ဆေးဝါးကဘာလဲ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
20:2016 pm မှာဇွန်လ 09, 08 - Edit
မင်းဘယ်ဆေးသောက်နေတာလဲ6ပတ်ကြာ dianabol သံသရာပြီးနောက် !!
TPC CLOMID + TAXIMOPHENE ကိုလုပ်တယ်
2:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 15, 04 - Edit
ဟိုင်း .. တစ်နေ့ကို Dianabol ဘယ်လောက်သောက်ရမလဲသိချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး
12:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 08, 08 - Edit
ဟိုင်း .... ကောင်းတယ်။ Dianabol ကိုတစ်နေ့ငါဘယ်လောက်သောက်ရမလဲ၊ CYCLE ပြီးနောက်ငါဘာပေးရမလဲသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
5:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 00, 00 - Edit
ဟယ်လိုငါ dianabol ကိုသုံးနေတယ်။ ဒီစက်ဝန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုသိချင်တယ်။ ငါယူမယ့်အချိန်တစ်နေ့မှာငါဘယ်လောက်သောက်သင့်တယ်ဆိုတာကိုငါသိချင်တယ်။ ငါစိုးရိမ်တယ်ငါစိတ်ပူမိတယ် watzap 84992105352
12:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 15, 56 - Edit
သင်သည်သင်၏သံသရာအတွင်းသို့မဟုတ်သင့်သံသရာပြီးနောက် tamoxifen ကိုသောက်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
29:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 21, 18 - Edit
3:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 10, 39 - Edit
9:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 11, 21 - Edit
ငါ Dianabol 10mg ကိုတစ်လလသောက်ပါတယ်။ ရက် ၉၀ ပြီးအောင်လုပ်နိုင်မလားဆိုတာသိချင်လို့လား၊ ဒါမှမဟုတ်စိတ်ထိခိုက်တာဖြစ်ဖြစ် Q အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ဘာကိုမေးသင့်သလဲ။
ကြည့်ရှုပါ၊ Drogena သက်ရောက်မှုကိုသင်စိတ်မထားပါက Diana ကိုမိန်းမများမသောက်သင့်ပါ။
Lucéliaငါ cirimalon ဝယ်! အဘယ်သို့သင်၏ရလဒ်များကိုဖြစ်ခြင်းနေကြသနည်း
13:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 18, 51 - Edit
ယောက်ျား, Dbol အရေပြားရောဂါကူးစက်စေနိုင်သလားငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား။ ငါစတင်လေ့လာခဲ့ပြီးတစ်ပါတ်အကြာတွင်ဆံပင်ပုံစံတစ်မျိုးပေါ်ထွက်လာပြီးငါးရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်ကိုခွဲစိတ်ခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်ခြေထောက်တွင်ကြီးမားသောအပေါက်တစ်ခုရှိသည်။
17:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 01, 07 - Edit
ငါသံသရာပေါ်မှာပေါ့, သင် post ကိုသံသရာအကြံပြုသလဲ
17:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 12, 44 - Edit
ဟိုင်းနီ! အကယ်၍ သင့်တွင်သံသရာ၊ TPC နှင့် anabolic steroids ကိုသောက်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက Giant's Formula ကိုသင်သိရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းသည်ဤဘာသာရပ်များအပေါ်တကယ့်လူတန်းစားဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကကိုနှိပ်ပါ http://bit.ly/curso-online-formula-de-gigantes
18:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 20, 28 - Edit
Diana ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံး TPC ကုစားနည်းများ။
17:2017 pm မှာမတ်လ 11, 01 - Edit
ကျွန်ုပ်မည်သည့် TPC ကိုအသုံးမပြုပါ။ ဤဆေးများကိုဆေးညွှန်းဖြင့်သာရနိုင်သည်။ ရင်သားကင်ဆာရှိသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သော Dece, Sustanon, Hemogenin နှင့် Winstrol ကဲ့သို့သော anabolic steroids ကိုသောက်ပြီးပြီ။
17:2017 pm မှာမတ်လ 18, 46 - Edit
23:2017 pm မှာမတ်လ 17, 56 - Edit
'Cycle Post- ကုသမှု' Jorge ။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကို“ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း” မှဖယ်ထုတ်ခြင်းအပြင်၊ ရရှိသောရလဒ်များသိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားရန်၊ အချိန်တိုတိုဖြစ်စေ၊ သံသရာတစ်ခုပြီးဆုံးပါက၎င်းကိုပြုလုပ်သင့်သည်။
16:2017 pm မှာမေလ 22, 34 - Edit
TPC (To Ready to Eat) အမျိုးသမီးများသည်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကဲ့သို့ပင် Skill လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကဲ့သို့ပင်
20:2017 pm မှာဇွန်လ 11, 31 - Edit
ကိုယ့် Dianabol ဆေးပြားကို ၃၅ ရက်ကြာသောက်နေရပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၅၂ နှစ်ရှိပြီ။
ငါ ၅ ကီလိုအလေးချိန်သာရခဲ့ပေမယ့်ခွန်အားအများကြီးရခဲ့တယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဘာမှမရှိဘူး။ အရမ်းခံစားရတယ်။ ..
29:2017 pm မှာဇွန်လ 13, 49 - Edit
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, ငါ dianabol နှင့်အတူသံသရာစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ငါအခြားနေ့တိုင်းယူပြီး, ထိုလမ်းကိုစောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်နေ့တိုင်းလျှောက်ထားရန်ပိုကောင်း?
20:2017 pm မှာစက်တင်ဘာလ 21, 23 - Edit
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ငါ့ဘဝမှာ anabolic steroids ကိုတစ်ခါမှမသုံးခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် Dianabol ကိုငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ငါတောင်မှတောင်ဝယ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေရဖို့၊ ငါကြွက်သားထုထည်အဘယ်အရာကိုရရှိမည်နည်း။ ငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများဘာတွေလဲ၊ သံသရာလည်ပြီးနောက်မည်သို့ယူရမည်နည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အားကစားခန်းမသို့ ၁၀ နှစ်တက်ခဲ့ဖူးသည့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုတွင်အစပြုသူမဟုတ်ပါ။ နှစ်ခွဲခွဲ၊ ခင်ဗျားရဲ့အဖြေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
19:2018 pm မှာပြီလ 14, 52 - Edit
သတင်းမှားများနှင့်ရယ်မောနေရုံသာမက၊ TPC (Post Cycle Therapy) ကို ၁၀ ပတ်မှ ၁၂ ပတ်အပြီးတွင်ပြုလုပ်သည်။ နောက်ဆုံးလျှောက်လွှာတင်ပြီးနောက်သင်အချိန်ယူရမည့်အရာပေါ်မူတည်သည်။
10:2018 pm မှာဇူလိုင်လ 21, 24 - Edit
ဟိုင်း၊ ငါတို့လျှောက်ထားသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားလုံးသည်ဆေးလုံး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်တန်းတူမဟုတ်လားဟုထင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ
ဝမ်းဗိုက် distension: ကဘာလဲ? အကြောင်းရင်းများကဘာလဲ။
ကြေးဝါရေနံ - ဒါဘာလဲ။ အသားအရေကိုတိုးတက်စေသလား။ ဘယ်လိုစားရမလဲ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များမစားရသောအစားအစာများ - တားမြစ်ထားသောအစားအစာစာရင်းကိုကြည့်ပါ။